समाचार - ट्याटू गरीएको व्यक्तिले ट्याटू स्टिकरहरू छनौट गर्नेछ？
सबैजना ट्याटू शब्दसँग परिचित छन्, हैन? आजकल धेरैजसो मानिसका आँखामा, कुनै पनि जसको शरीरमा ट्याटू छ उसलाई एक सामाजिक व्यक्ति मानिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले तिनीहरूको आँखामा तथाकथित "शान्त" को खोजीमा ट्याटूहरू छनौट गरेका छन्। टाटुहरू आज कल केटीहरूको जस्तै प्रवृत्ति भएको छ। सबैको मन सुन्दरता मनपर्दछ, तर यस संसारमा कुनै पछुतो छैन।
तिमी किन त्यसो भन्छौ? किनभने धेरै मानिसहरू ट्याटू भइसके पछि पछुताउँछन्। ट्याटू गर्दा यो दुख्छ, र ट्याटू हटाउँदा अझै बढि दुखाई। धेरै युवा जोडीहरूले प्रेम अवधिमा पागल काम गर्छन्, जस्तै एक जोडी ट्याटू प्राप्त गर्ने, तर के ब्रेक अप भएपछि? स्मारकको रूपमा बस्नुहुन्छ? यसले पनि काम गर्ने छैन, किनकि यदि तपाईसँग यो छैन भने तपाईसँग अर्को पनि हुन्छ। जब तपाईं ट्याटू हटाउनुहुन्छ, तपाईं पछुताउनु हुनेछ।
ट्याटू गरीएका व्यक्तिहरूले ट्याटू स्टिकरहरू छनौट गर्नेछन्?
यदि र color फीड हुन्छ भने ट्याटू पनि मेटाइन्छ, र ढाँचा परिवर्तन भयो यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने। सम्पादक तपाईलाई यो बताउन धेरै जिम्मेवार छ कि ट्याटु स्टिकर ट्याटूहरू बदल्न सक्दैन। ट्याटु स्टिकर प्रेमी हुन्, र ट्याटु त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सम्पूर्ण जीवनको साथ दिन्छ। दुई बीचको भिन्नता स्पष्ट छ। सबैजना प्राय: यसो भन्छन्: तपाईंसँग रक्सी छ? ट्याटूको बारेमा मसँग एउटा कहानी छ ...